राजमार्गको सीमाः कानुनमा २५ गज, सरकारले बढायो ३१ मिटरसम्म::KhojOnline.com
पुस, काठमाडौं । राजमार्गहरुको ‘सडक सीमा’ कति हो ? यसमा धेरै अन्योलमा छन्, कसैले २५ मिटर भन्छन् त कसैले ३१ । वास्तवमै राजमार्ग मात्रै होइन, सहायक राजमार्ग, जिल्लास्तरीय सडक र शहरी सडकको सीमा कति हो भन्नेमा आम नागरिक अलमलमा छन् । सरकारी अधिकारी पनि यो अन्योल चिर्ने गरी खुलेर बोल्दैनन् ।
उनका अनुसार राजमार्गमा दायाँ-बायाँ ३१-३१, सहायक राजमार्गमा २१-२१ तथा जिल्ला र शहरी सडकमा १६-१६ मिटरभित्र घरलगायत स्थायी संरचना बनाउन बन्देज छ ।
यातायात मन्त्रालयका एक पूर्वसचिवका अनुसार अहिले ३१ मिटरमा रहेको यस्तो सडक सीमा ०३१ सालमा ऐन बन्दा मुख्य राजमार्गको हकमा २५ गज (७५ फिट) मात्रै थियो । अहिले बढेर ३१ मिटर पुगेको हो ।
लफडा २५ गजको !
२०३४ सालसम्म कानुनमै सडक सीमा दायाँ-बायाँ २५ गज कायम थियो । त्यतिबेला नियमअनुसार राजमार्गमा घर बनाएका नागरिकले २५ गज छाडेरै संरचना तयार गरेका थिए ।
तर, ०३४ सालमा सरकारले ब्रिटिस मापन पद्धति (एफपीएस)लाई अमेरिकी (एमकेएस)मा रुपान्तरण गर्ने निर्णय गर्‍यो । त्यसअघिको नापको प्रणाली एफपीएसले फुट, पाउन्ड र सेकेन्डलाई प्रतिनिधित्व गर्थ्यो । तर, एमकेएसमा लगिएपछि नापको पद्धति मिटर, किलोग्राम र सेकेण्डमा बदलियो ।
नयाँ नाप प्रणालीअनुसार फिटलाई मिटरमा शाब्दिक रुपमा परिवर्तन गरिदिँदा दायाँ-बायाँ ७५-७५ फिटको सडक सीमा ८२ फिट (२५मिटर)मा लम्बियो । १०-१० गजको सीमा तोकिएका सडकमा १०-१० मिटर कायम भए भने १५-१५ गजको सीमा पनि १५-१५ मिटरमा लम्बिए ।
अहिले ३१ मिटर कसरी पुग्यो ?
ऐनमा सरकारले विद्यमान सडक सीमामा दायाँ-बायाँ ६-६ मिटर जग्गामा स्थायी संरचना बनाउन रोक्न सक्ने व्यवस्था छ । त्यसका लागि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर राजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्छ ।
यही व्यवस्थाका आधारमा तत्कालीन सरकारले सडकका दायाँ-बायाँ ६-६ मिटरमा स्थायी प्रकृतिका संरचना निर्माण गर्न नदिने निर्णय गर्‍यो । यो निर्णयले दायाँ-बायाँ २५-२५ मिटरको सडक सीमा ३१-३१ मिटरमा पुग्यो भने १५ मिटरको २१ र १० मिटरको सडक १६ मिटरमा फैलियो ।
भविष्यमा सरकारले सडक विस्तार गर्दा दायाँ-बायाँ ३१ मिटर नै दाबी गर्ने अवस्था छ । त्यसमध्ये ६ मिटरको लालपूर्जा भने नागरिकसँगै छ ।
तीन वर्षअघि यातायात मन्त्रालयले ०४८ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले गरेको ६-६ मिटर सीमा विस्तारको निर्णय खारेजीको प्रस्ताव क्याबिनेटमा लगेको थियो । तर, मन्त्रिपरिषद्मा यस विषयमा छलफल नै हुन पाएन । तत्कालीन मुख्यसचिवले निर्णय फिर्ता लिन नमिल्ने अडान लिएका थिए ।
वर्तमान सरकारले यस्तै विवाद रहेको हेटौंडामा राजमार्ग नै बजारबाट सार्ने निर्णय गरेको थियो । भर्खरै भएको प्रतिनिधि तथा प्रदेशसभा चुनावको मुखमा ऊर्जामन्त्री कमल थापाले मतदाता प्रभावित गर्नका लागि हेटौंडा बजार क्षेत्रको राजमार्गलाई राप्ती खोलाको किनारमा बनेको ‘बाइपास-वे’मा सार्ने निर्णय गराएका थिए ।
यस्तै, कृष्णप्रसाद भट्टराईको नेतृत्वमा ०४६ सालमा बनेको सरकारले पनि नौबिसे-मुग्लिन सडकको सीमा २५ मिटरबाट घटाएर १५/१५ मिटर कायम गरेको थियो । तत्कालीन यातायात मन्त्री मार्सल जुलुम शाक्यले गरेको उक्त निर्णयलाई पछि सर्वोच्च अदालतले फरक हिसाबले व्याख्या गरिदिएको थियो ।
बुध, पुस १९, २०७४ मा प्रकाशित